David Oyelowo – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Rise of the Planet of the Apes (2011) Unicode Rise of the Planet of the Apes ကတော့ ရှေ့က Remake file ထွက်ရှိအပြီး Reboot Series အနေနဲ့ 2011 မှာထွက်ရှိလာတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားကတော့ IMDb မှာ 7.6 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 82% တောင်ရထားတဲ့ကားကောင်းလေးပါ။ Rating ပဲကောင်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒီကားလေးက တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးပါ။ ကဲဇာတ်လမ်းလေးကိုသွားရအောင်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မျောက်ဝံတွေကိုစမ်းသပ်ပြီး ဆေးရှာတဲ့ ဆရာဝန် ဝေလ်ကနေစပြီးပြောရမှာပဲ။ သူကပြောထားတဲ့အတိုင် းဆရာဝန်တစ်ယောက် ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းနေတဲ့ အဖေတစ်ယောက်လဲရှိတယ်။ သူဒီဆေးအတွက် နှစ်တွေအကြာကြီး ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတော့ တစ်နေ့မှာ အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ် အစမ်းသပ်ခံမျောက်မလေးကလဲ ဉာဏ်ရည်တွေ မြင့်လာခဲ့တယ်။ တကယ်လဲမျောက်မလေးကို ထုတ်ပြရမဲ့အချိန်ကျတော့ ရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့ ပွဲပျက်ခဲ့ရတယ်။ နောက်မှသိလိုက်ရတာက မျောက်မလေးမှာ သူတို့မသိပဲမွေးထားတဲ့ မျောက်ဝံလေးတစ်ကောင်ရှိနေတယ်။ အကုန်သတ်ပစ်ရမဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မသက်သာပဲ ဆရာဝန်လေးဝေလ်မွေးစားခဲ့ရပြီးနောက် ...
IMDB: 7.6/10 492436 votes
The Last King of Scotland (2006) လူအခြင့္အေရးကို ဆံုးရႈံးေနတဲ့ Uganda က အာဏာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ေတြကို အေျခခံၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ့ဇာတ္လမ္းပါ. သူ႔ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ငွားရမ္းထားတဲ့ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္တစ္ဦးရဲ႕ ရႈေထာင့္ကေန အသည္းထိတ္စရာ အနိဌာရံုေတြကို ရိုက္ကူးျပထားတာပါ.ဒီဇာတ္ကားမွာ အာဏာရွင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မင္းသားၾကီး Forrest Whitaker ဟာ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသားဇာတ္ပို႔ဆု ေအာ္စကာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္. Credit Review
IMDB: 7.7/10 164,794 votes